मैले अपांगता भएका साथीहरुलाई ५० प्रतिशत छुट दिलाउन सकिरहेको छैन: वाग्ले – युवा अभियान
obhadnari — २०७४ मंसिर १८, सोमबार ०८:३६0comment
हामी यो कुरा स्विकार्न तैयार छौ कि बारामा यकिन तथ्यांक नआएपनि करिब १८ हजार अपांगता भएका ब्यक्ति हुनुहुन्छ । अहिले जम्मा ६ हजारले मात्र परिचय पत्र पाएको अवस्था छ । अब आउने दिनमा स्थानिय तहसंग समन्वय गरेर परिचयपत्र वितरणलाई तिब्रता दिनेछौ । किनकि अपांगताको पहिचानको परिचय पत्रबाट मात्र हुन्छ ।
१७ मंसिर, सिमरा । सुप्रिया ढकाल
स्वागत छ तपाईलाई कपुरबोटमा ।
धन्यबाद सुप्रिया जि ।
बारामा कस्ता-कस्ता प्रकृतिका अपांगता भएका ब्यक्तिको संख्या कति छ ?
बारामा जनगणनाको तथ्यांक हेर्दा अपांगता भएका ब्यक्तिहरु करिब १२ देखी १३ हजार छन् । अझ बढ्ने सम्भावना तर यकिन तथ्यांक आएको छैन् । हाम्रो अनुमान अनुसार बारामा अपांगता भएका ब्यक्तिको संख्या करिब १८ हजार छ । अब नेपाल सरकारले परीभाषित गरेका १० प्रकारका अपांगता छन् । यी सबैखालमा अपांगताहरु धेरथोर छन् तर सबैभन्दा बढी चाहि शारिरिक अपांगता, बौद्धिक अपांगता, दृष्टिविहिन र बहिरा अपांगाता भएकाहरु छन् । राज्यले समग्र देशमा ३ प्रतिशत जनता अपांगता भएका छन् भनिरहदा हाम्रो तथ्यांकमा ४ देखी ६ प्रतिशत नै देखीन्छ ।
कस्ता कस्ता अपांगता भएकाहरुलाई कुन किसिमको परिचय पत्र दिईन्छ ?
सबैभन्दा जटिल समस्याका रुपमा यहि परिचय पत्र वितरण रहेको छ । नेपाल सरकारले अपांगताको गम्भिरताको आधारमा, उसको अशक्तताको आधारमा, उसको क्षमताको आधारमा चार प्रकारको परिचयपत्रको पहिचान गरेको छ । पूर्ण अशक्त अपांगता, जसलाई रातो कार्डको रुपमा हामी परिचय पत्र प्रदान गर्छौ, जसले चाहि २४ सै घण्टा अर्को ब्यक्तिको सहारामा बांँच्नुपर्ने हुन्छ । दैनिक जिवनयापन नै अरुको भरमा गर्नुपर्ने त्यस्तो ब्यक्ति जसबाट भविश्यमा केहि गर्न सक्दैन त्यस्ता ब्यक्तिले पूर्ण अशक्त पहिचानको रातो परिचयपत्र पाउछन् । यो कार्डलाई नेपाल सरकारले २ हजारका दरले भत्ता उपलब्ध गराउछ । तर शिक्षा, रोजगारी जस्ता अन्य क्षेत्रमा रातो कार्डले ठाउ पाउदैन । त्यसैगरी अति अशक्त अपांगता जसले निलो परिचय पत्र पाउछन् । पूर्ण दृष्टिविहिन, ह्विलचियर प्रयोगकर्ता, पूर्ण डेफ, लगाएतका ब्यक्तिालाई यो निलो परिचयपत्र वितरण गरिन्छ । यो परिचय पत्रलाई नेपाल सरकारले ६ सय रुपैया भक्ताको ब्यवस्था गरेको छ । सहायक सामाग्रीको माध्यमबाट दैनिक जिवनयापन गर्ने ब्यक्तिहरुलाई मध्यम अपांगता भएका ब्यक्तिको रुपमा पहिचान गरि पहेलो रंगको अपांगता परिचय पत्र वितरण गरिन्छ । र सामान्यता कुनै पनि समस्या नआएका तर अन्य सामान्य ब्यक्तिभन्दा फरक भएका ब्यक्तिहरुलाई सेतो परचयपत्र वितरण गरिन्छ ।
अपांग अधिकार ऐन २०७४ ले अपांगताको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ नि, केके थप गरेको छ ?
हो ! भर्खरै पारित भई राष्ट्रपतिद्धारा प्रमाणित भैसकेको अपांग अधिकार ऐन २०७४ ले ३ थरीको अपांगता थप गरेको छ । योसंगै अब नेपालमा १० किसिमका अपांगता भए । पहिलो मनोसामाजिक अपांगता जसलाई गाउघरमा डिप्रेसन भन्ने गरिन्छ, दोश्रो हेमोफेलीया, जसलाई अनुवंशीय रक्तश्राव पनि भनिन्छ । त्यस्तै तेश्रो चाहि अटिजम भनेर थपिएको छ । तिब्र बौद्धिक पना भएका ब्यक्तिलाई यसमा राखिन्छ । यसलाई हामीले तल्लो तहसम्म पु¥याएर सबैमा पहिचान गराउन समय लाग्छ, त्यो बिस्तारै हामी गर्दै जानेछौं ।
हाल कायान्वयनमा आएका अधिकांश तह तथा वडाका कार्यलयहरु अपांगमैत्री छैनन्, अपांगमैत्री वातावरणको लागी तपाईको भुमीका के ?
नेपाल सरकारले पनि अब बन्ने नया भौतिक संरचनाहरु अपांगमैत्री हुनुपर्छ भनेर सर्कुलर गरीसकेको अवस्था छ । हिजोको दिनमा जनप्रतिनिधि नहुदा काम गर्न धेरै कठिनाई थियो । अब सहज हुने अपेक्षा छ र धेरैजसो नया बनिरहेका भवनहरु अपांगमैत्री नै बनिरहेको पाईन्छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिले पनि हरेक क्षेत्रलाई अपांगमैत्री बनाउनुहुनेछ भन्नोन हामी आशाबादि छौँ ।
जिल्लामा रहेको हेल्पडेस्क स्थानिय तहमा कहिलेसम्म आउछ ?
एकदमै सान्दर्भिक कुरा हो । हिजोका दिनमा समाज कल्याण मन्त्रालयले गर्दै आएका कामहरु अब स्थानिय मन्त्रालय अन्तर्गत आएका छन् । अब ४÷५ महिना भित्रमा माथीबाट निर्देशिका आउदैछ । हरेक स्थानिय तहमा एउटा हेल्पडेस्क हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज छ र मलाई लाग्छ, ६ महिनाभित्रमा यो निर्देशिका आउछ र सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्छ ।
तपाई त बाराकै बासिन्दा हुनुहुन्छ, अपांगता भएकाहरुले सार्वजनिक सवारी देखी अन्य क्षेत्रमा पाउनुपर्ने आरक्षण सिट समेत नपाईरहेको अवस्थामा तपाई के गर्दैहुनुहुन्छ ?
हामीले पहल नै नगरेको होईन । हामीले सिटिराईड देखी सबैलाई सिटमा अपांगता÷ अशक्त भनेर लेखाउने काम पनि गरेका छौ । तर कार्यान्वयनमा समस्या छ । हामी आफै यो कुरामा लज्जित छौ । म यहि गाउमा छु, यहि जिल्लामा छु, तर आफ्नै ठाउमा समेत मैले अपांगता भएका साथीहरुलाई ५० प्रतिशत छुट दिलाउन सकिरहेको छैन । बनेका ऐन कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन म स्वयं प्रयासरत छु र यसमा सहयोग गर्न म सबै आम जनसामुदायलाई आग्रह गर्छु ।
अब अन्त्यमा, अपांगता परिचय पत्र लिन समेत पहुच हुनु पर्ने रहेछ, हामीले परिचयपत्र नै पाएनौ भन्दै थुप्रै गुनासाहरु मिडियामा आउने गर्छन् । के तपाईहरुले कानमा तेल हालेरै बस्नुभएको हो ?
गुनासाहरु मैले पनि सुनिरहेको छु । हामीसंग श्रोतसाधन सिमित छ । नपाउदाका गुनासाहरु चाहि धेरै छन् । रातो कार्ड नै सकेसम्म खोजि गर्नुहुन्छ । यो सबैले नपाउने भएकाले म सञ्चारमाध्यमबाट के भन्न चाहान्छु भने, जुन ब्यक्तिले अशक्तताको आधारमा नियमानुसार जुन कार्ड पाउनुपर्ने हो त्यहिमात्र पाउन सक्नुहुन्छ । यसको लागी नियम मिचेर नेपाल अपांग सेवा संघ बाराले सिफारीस गर्न सक्दैन र अहिले त भोटको लागी जनप्रतिनिधि एवं उम्मेद्वारहरुले सिफारीस गर्न आउनुहुन्छ तर नियमवितरीत कार्ड सिफारीस गर्न आउनेलाई नै सरकारले कार्वाहिको ब्यवस्था गरेको छ । यदि कसैले नियमवितरीत रातो कार्डको सुविधा लिईरहेको पुष्टि भए उसले उपभोग गरेको सबै सुविधा असुलि कडा कार्वाहिको ब्यवस्था छ । हामी यो कुरा स्विकार्न तैयार छौ कि बारामा यकिन तथ्यांक नआएपनि करिब १८ हजार अपांगता भएका ब्यक्ति हुनुहुन्छ । अहिले जम्मा ६ हजारले मात्र परिचय पत्र पाएको अवस्था छ । अब आउने दिनमा स्थानिय तहसंग समन्वय गरेर परिचयपत्र वितरणलाई तिब्रता दिनेछौ । किनकि अपांगताको पहिचानको परिचय पत्रबाट मात्र हुन्छ । यसको लागी म सबै जनप्रतिनिधिज्युहरुलाई आग्रह गर्छु यथाशिघ्र यो ब्यवस्था स्थानिय तहबाटै सञ्चालन हुनुपर्छ ।
तपाईलाई समय र संवादका लागी धन्यबाद छ ।
तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्बाद ।